Iwu nzuzo - Designer Abù
Ọ bụrụ na ịbanye ịbanye, ị gbanwere obi gị, ị nwere ike ịdọrọ nkwenye gị ka anyị kpọtụrụ gị, maka nchikọta, iji ma ọ bụ igosipụta ozi gị, n'oge ọ bụla, site na ịkpọtụrụ anyị na info@dznrspot.com ma ọ bụ zite anyị na:
Anyị na-echekwa data gị na sava echekwara n'azụ firewall.
All kpọmkwem ugwo gateways rube isi na ụkpụrụ setịpụrụ PCI-DSS dị ka jisiri site PCI Security Standards Council, nke bụ a na nkwonkwo mgbalị nke ụdị dị ka Visa, MasterCard, American Express na Discover.
Storelọ ahịa anyị na-eji Google Analytics enyere anyị aka ịmụ banyere nleta ụlọ ahịa na ibe ndị a na-elele.
Ọ bụrụ na ị na-enye anyị ozi kaadị akwụmụgwọ gị, ezoro ezo ozi ya na iji teknụzụ oyi akwa (SSL) ma chekwaa ya na nsonye AES-256. Ọ bụ ezie na usoro ntinye ọ bụla nke Intanet ma ọ bụ nchekwa nchekwa bụ 100% echekwara, anyị na-agbaso ihe niile PCI-DSS chọrọ ma mejuputa ụkpụrụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ agbakwunyere n'ozuzu.
PREF, na-anọgidesi ike maka oge dị mkpirikpi, Setịpụ Google na egwu ndị na-eleta ụlọ ahịa na ebe
Ọ bụrụ na ịchọrọ: ịnweta, dozie, mezie ma ọ bụ hichapụ ozi nkeonwe ọ bụla anyị nwere banyere gị, debanye akwụkwọ mkpesa, ma ọ bụ chọọ karịa ozi kpọtụrụ Onye na-ahụ maka Nzuzo Anyị na info@dznrspot.com ma ọ bụ site na mail na